एक क्षमता के हो? प्रमुख competencies र आफ्नो मूल्यांकन। शिक्षक र विद्यार्थीहरूको क्षमता
"प्रतिस्पर्धा" एउटा शब्द हो जुन लागू हुन्छ, सायद प्राय: प्राय: तर यो कहिलेकाहीँ ती व्यक्ति वा अन्य कुराकानीहरूमा पर्ची गर्दैन। अधिकांश मानिसहरू यसको मतलब एक सानो धुंधला, क्षमता संग भ्रमित र बिन्दुमा पर्याप्त रूपमा प्रयोग गर्न को अर्थ बुझ्छ। एकै समयमा, यसको सटीक अर्थले धम्की र छलफलका साथ साथै कार्यवाहीमा गहन तर्कको रूपमा सेवा गर्न सक्छ। त्यसैले के क्षमता छ? उनी के के मतलब छन् र के हुन्? हामी अधिक जानकारी विस्तार गर्नेछौं।
एफ्रोमोवाको अनुसार, क्षमता को ज्ञान को क्षेत्र को रूप मा परिभाषित गरिएको छ र उन मुद्दों को दायरा जसमा एक व्यक्ति को राम्रो तरिकाले सूचित गरिन्छ। उही स्रोतको अनुसार दोस्रो परिभाषा, भन्छ कि यो शब्दले अधिकार र शक्तियोंको एक सेट पनि गर्दछ (आधिकारिकलाई बुझाउँछ)। उत्तीर्ण शब्द "व्यावसायिक क्षमता" मा कम हुन्छ । त्यो पहिलो भन्दा कम हानिकारक छ। तर यो परिभाषा कस्तो क्षमताको हालको मुद्दाको सार सारै उपयुक्त छ, किनकि पहिलो संस्करण धेरै समीकरणमा छ र यसैले संकीर्ण रूपमा परिभाषित गरिएको छैन।
प्रतिस्पर्धा र यो सर्त नजिक
क्षमता र क्षमताको शर्तको व्याख्यामा दुईवटा दृष्टिकोणहरू छन्:
प्रतिस्पर्धा, लगभग बोल्ने, कुनै पनि क्षमताको स्वामित्व हो। के अनुसार व्यापक रूपमा अन्तिम शब्दलाई विचार गरिन्छ, र पहिलो अवधारणा संग तिनीहरूको सम्बन्ध व्याख्या गरिएको छ। वैसे, त्यो एक व्यक्ति, उनको क्षमता को गुणवत्ता को विशेषता को रूप मा वर्णन गरिएको छ। प्रतिस्पर्धा फरक फरक छ - यो सबै भन्दा माथि, समग्रता।
प्रतिस्पर्धा यसको संरचना को निम्नलिखित तत्वों को संपर्क को अभिन्न परिणाम हो:
विश्वास गर्नुहोस्। व्यक्तिगत लक्ष्यहरूको पहिचान, निश्चित योजनाहरू ड्राइंग, परियोजना परियोजना निर्माण, साथै इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि कार्यहरू र कार्यहरू। लक्ष्य र व्यक्तिगत अर्थको अनुपात ग्रहण गरिन्छ।
प्रेरणा। साँचो चासो र ईमानदार जिज्ञासा एक व्यक्ति सक्षम छ जुन, यस गतिविधि संग सम्बन्धित हरेक उत्पन्न कार्य को हल गर्न को लागि आफ्नो कारणहरु को उपस्थिति।
अभिमुखीकरण। बाह्य आवश्यकताहरु को काम को प्रक्रिया मा लेखांकन (उनको काम को आधार को समझ, यसमा अस्तित्व को अस्तित्व) र आन्तरिक (विषय अनुभव, अन्तर्वार्ता ज्ञान, गतिविधि को तरिकाहरु, मनोविज्ञान को विशिष्ट विशेषताहरु र यति मा)। वास्तविकता र आफैंको यसको मूल्याङ्कन - यसको योग्यता र विध्वंस।
कार्यात्मक। क्षमताको उपलब्धता न केवल, तर प्रयोगमा प्राप्त ज्ञान, दक्षता, तरिका र गतिविधिको तरिका अभ्यास गर्न पनि प्रयोग गर्नुहोस्। उनीहरूको आफ्नै विकासको निर्माण, विचार र अवसरहरूको नवाचारको लागि आधार साक्षरताको जागरूकता। कठिन निष्कर्ष र निर्णयको डरको अनुपस्थिति, गैर-टेम्प्लेट विधि छनौट।
नियन्त्रण गर्नुहोस्। गतिविधिहरु को समयमा पाठ्यक्रम र निष्कर्ष को मापने को सीमाहरु छन्। अगाडि बढ्दै - त्यो हो, विचारहरू सुधार्न र सही र प्रभावकारी तरिकाहरू र तरिकाहरू सुरक्षित गर्दै। कार्यहरू र लक्ष्यहरूको सम्बन्ध।
मूल्याङ्कन गर्दै। तीन "आत्म" को सिद्धान्त: विश्लेषण, मूल्यांकन, नियन्त्रण। ज्ञान, दक्षता वा चुनेको छनौट को स्थिति, आवश्यकता र प्रभावशीलताको आकलन गर्नुहोस्।
प्रत्येक तत्वले यसको व्यवहारबाट सबैलाई प्रभाव पार्न सक्छ र "क्षमता सिर्जना" को धारणाको लागि एक महत्वपूर्ण कारक हो।
टर्मिनोलजीले यो सामान्यतया कुन प्रतिस्पर्धाहरू सामान्य अर्थमा बुझ्न सम्भव बनायो। विशेष गरी, यो तीनवटा विस्तृत श्रेणीमा विभाजित छ:
प्रत्येक कोटिहरूमा धेरै प्रजातिहरू छन्। त्यहाँ कुल बीस छन्।
प्रतिस्पर्धाहरू पनि अर्को सिद्धान्तमा विभाजन गर्न सकिन्छ: उदाहरणका लागि, तिनीहरूको मालिकको आधारमा। यस्तो प्रकारका व्यवसायहरू, संस्थाहरू र सामाजिक समूहहरूमा असर पर्नेछ।
निम्नलाई विचार गर्नुहोस्:
शिक्षकको प्रतिस्पर्धा पेशेवर र शैक्षणिक क्षमता को सार ।
विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धा एक ज्ञान र कौशल को सीमित सेट परिभाषित।
यी मानिसहरू किन चुनेका थिए?
शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध एक जटिल संरचना हो जसमा धेरै तत्वहरू छन्। एक मा मामला अपर्याप्त योग्यता एक को लागि एक समान समस्या मा प्रवेश गर्दछ। शिक्षकको क्षमतामा कुन कुरा समावेश गर्नु पर्छ को लागी, अझ पनि अस्पष्ट परिस्थिति यहाँ हेर्न सकिन्छ।
अधिकतर विद्वानले भने कि विद्यार्थीहरूको क्षमता, अझ ठीक छ, उनीहरूको संख्या सख्तै सीमित हुनुपर्छ। फलस्वरूप, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छनौट गरियो। तिनीहरूको दोस्रो नाम मुख्य क्षमता हो।
युरोपियनहरूले कुनै स्पष्टीकरण बिना आफूलाई आफ्नै सूची बनाएका छन्। त्यहाँ छवटा अंकहरू छन्। विद्यार्थी हुनुपर्दछ:
मुख्य कार्यको रूपमा जान्नुहोस्;
सोच्नुहोस् - विकासको इन्जिनको रूपमा;
खोज्नुहोस् - प्रेरक तहको रूपमा;
संवाद प्रक्रियाको रूपमा सहकार्य गर्नुहोस्;
सामाजिक सुधारको रूपमा अनुकूल गर्नुहोस्;
व्यवसायको लागि तल जानुहोस् - माथिको सबैको पहिचानको रूपमा।
घरेलु वैज्ञानिकहरूले यो मुद्दा अधिक जिम्मेवार रूपमा लिइन्। यहाँ विद्यार्थीहरूको आधारभूत क्षमताहरू छन् (कुलमा सात):
सिक्ने क्षमता। यसले मान्दछ कि एक विद्यार्थी जो स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्न सक्षम छ, काम, रचनात्मकता, विकास, र जीवनमा स्वतन्त्रताका समान कौशलहरू लागू गर्न सक्छन्। यो क्षमता विद्यार्थीहरूको छनौट को लक्ष्य को लागि प्रदान गर्दछ वा शिक्षक द्वारा छानिएको लक्ष्य को मान्यता र स्वीकृति। यसमा श्रम योजना र संगठन, विशेष ज्ञानको लागि छनोट र खोजी, आत्म-नियन्त्रणको क्षमताहरू पनि समावेश गर्दछ।
सबै सांस्कृतिक। व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै धारणा विकास र समाजमा, आध्यात्मिक विकास, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिको विश्लेषण, भाषा कौशलको उपलब्धता र प्रयोग, नैतिक र सामाजिक-सांस्कृतिक सांस्कृतिक मानहरूमा आत्म-शिक्षा, सहनशीलताको सांस्कृतिक अन्तरक्रियाको लागि अभिविन्यास।
सिविल। यस क्षमतामा समाज र राजनीतिक जीवनमा नेविगेट गर्ने क्षमता समावेश छ, जुन समाज, राज्य, र सोशल समूहको सदस्यको रुपमा आफुलाई चिन्न सकिन्छ। वर्तमान घटनाहरु र समाज र सरकारी प्राधिकरणहरु संग अन्तरक्रिया को विश्लेषण। अरूको चासोको साथ विचार गर्नुहोस्, उनीहरूको आदर गर्नुहोस्, एक विशिष्ट देशको प्रासंगिक कानून अनुसार कार्य गर्नुहोस्।
उद्यमी। केवल उपलब्धता उपलब्ध छैन, तर क्षमताहरु को प्राप्ति पनि। यसमा अन्यको बीचमा वांछित र वास्तविक, गतिविधिहरूको संगठन, अवसरहरूको विश्लेषण, योजनाहरू ड्राइंग र श्रमको परिणाम प्रस्तुतिको अनुपात।
सामाजिक। सामाजिक संस्थाहरूको तंत्रमा एक स्थान निर्धारण, सामाजिक समूहमा अन्तरक्रिया, सामाजिक भूमिका, कूटनीति र सम्झौता गर्न आउन सक्ने क्षमता, एक आफ्नै कार्यका लागि जिम्मेवारी, समुदाय।
सूचना र संचार। सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं को व्यावहारिक उपयोग, सूचना मोडेल निर्माण, प्रक्रिया को मूल्यांकन र प्रौद्योगिकी प्रगति को परिणाम।
स्वास्थ्य। आफ्नो आफ्नै स्वास्थ्य (नैतिक, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आदि) को संरक्षण र अरूलाई, जुन माथिल्लो प्रकारको स्वास्थ्यको विकास र रखरखावमा योगदान पुर्याउने आधारभूत कौशल समावेश गर्दछ।
कुञ्जी योग्यताहरू (आधारभूत क्षमताहरू)
युरोपेली देशहरू "योग्यता" र "क्षमताहरू" को अर्थसँग पर्याय छ। कुञ्जी क्षमताहरू पनि आधारभूत कौशल भनिन्छ। तिनीहरू, बारीमा, ती व्यक्तिगत र पारस्परिक गुणहरू द्वारा विभिन्न सामाजिक र कार्य परिस्थितिहरूमा विभिन्न रूपहरूमा व्यक्त गरिएका द्वारा निर्धारण गरिन्छ।
युरोपमा व्यावसायिक शिक्षामा कुञ्जी क्षमताहरूको सूची:
सामाजिक। नयाँ समाधानहरूको विकास र उनीहरूका कार्यान्वयन, परिणामहरूको लागि जिम्मेवारी, कर्मचारीहरूसँग व्यक्तिगत चासोको सम्बन्ध, सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय गुणका लागि सहनशीलता, टीममा स्वस्थ कुराकानीको ग्यारेन्टीको रूपमा सम्मान र सहयोग।
संचार। मौखिक र लिखित संचार विभिन्न भाषामा विभिन्न भाषामा भाषाहरू, संचार कौशल, संचारको नैतिकता सहित विभिन्न भाषाहरूमा।
सामाजिक-सूचना। सोही सूचना, स्वामित्व र सूचना प्रविधिको विभिन्न परिस्थितिमा प्रयोग, मानव योजना योजनाको बारेमा बुझ्न, सम्भावना र सामाजिक सामाजिक अवस्थाको धारणा - कम्प्यूटर, जहाँ पहिलो लिङ्क दोस्रो आदेश गर्दछ, र यसको विपरीत।
संज्ञानात्मक, पनि व्यक्तिगत भनिन्छ। आध्यात्मिक स्व-विकासको आवश्यकता र यस आवश्यकताको प्राप्ति - आत्म-शिक्षा, सुधार, व्यक्तिगत विकास।
अन्तर्वार्ता सहित, इन्टरनेट पनि।
विशेष। व्यावसायिक क्षेत्रमा पर्याप्त क्षमताको लागि आवश्यक कौशल, यस गतिविधिमा स्वतन्त्रता, आफ्नो कार्यहरूको पर्याप्त मूल्यांकन।
प्रतिस्पर्धा र योग्यता
सोभियत पछाडिको ठाउँको एक व्यक्तिको लागि, तथापि, समानार्थीको रुपमा शीर्षकमा सर्तहरू सुन्नको लागि यो अलि अजीब छ। कुन क्षमताको प्रश्न हो, फेरि उठ्न सुरु हुन्छ र स्पष्ट परिभाषाको लागि केहि परिमार्जन चाहिन्छ। घरेलू शोधकर्ताहरू स्थिर र सीमित राज्यहरूमा, ढाँचाको गतिविधिको लागि योग्यता पर्याप्त तैयारीलाई बोलाउँछन्। यसलाई क्षमताको ढाँचाको एक तत्व मानिन्छ।
तर यो केवल भिन्नताहरूको सुरुवात हो। साथै, विभिन्न स्रोतहरूमा कुञ्जी क्षमताहरू फरक नामकरण र व्याख्या छ।
Zeer को प्रमुख विश्वव्यापी ज्ञान, साथ साथै सांस्कृतिक र अंतःविषयशास्त्र भनिन्छ। उनको विचारमा, उनीहरूले गतिविधिको निश्चित व्यावसायिक क्षेत्रको लागि आवश्यक विशिष्ट कौशलहरू लागू गर्न मद्दत गर्छन् र कुनै पनि परिस्थितिमा गैर-मानक र नयाँ परिस्थिति र उत्पादक र कुशल कार्यमा अनुकूलनका लागि आधारको रूपमा सेवा गर्छन्।
VI बिडेनको अर्को महत्त्वपूर्ण तह - पेशेवर-अभिविन्यास सक्षम पारिएको।
अवधारणामा चार बाध्यकारी व्याख्याहरू छन्:
जानकारी प्राप्त गर्न र स्वीकार गर्ने र निरन्तरता र लचीलापनको संयोजन, साथसाथै एक पेशेवर वातावरणमा समस्या समाधान गर्न प्राप्त डेटा लागु गर्ने; माथिल्लो वातावरणसँग अन्तरक्रियाको लागि खुलापन।
गुणस्तरको डिजाइनको लागि निर्माणको रूपमा प्रयोग गरिने गुण, दायरा र आवश्यक जानकारीको मापदण्ड।
गुणस्तर र प्रभावको प्रभावकारी कार्यान्वयन जसले उत्पादकता र प्रभावकारीतामा योगदान दिन्छ।
अनुभव र जानकारी संयोजन गर्ने व्यक्तिलाई उनीहरूको काम गतिविधिमा प्रगति गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि हामी बिडिनेको प्रस्तावित शब्दावलीलाई विचार गर्दछौं, त्यसपछि हामी निष्कर्षमा पुग्छौं कि व्यावसायिक क्षमता केवल एक कौशल होइन, यो आन्तरिक पूर्वनिर्धारित हो जसले एक्लै कामको क्षेत्रमा कार्य गर्न र कार्य प्रदर्शनका आवश्यकताहरूको अनुसार कार्य गर्दछ। सक्षम कर्मचारी यो गर्न तयार छ।
शिक्षकको क्षमता पेशेवरको कोटिहरु मध्ये एक हो, र यो व्यावसायिक र शैक्षिक क्षमताको क्षेत्र पनि समावेश गर्दछ। यसको बारेमा - तल।
व्यावसायिक र शैक्षिक क्षमता
शिक्षकको क्षमताको अवधारणा शिक्षकको व्यक्तिगत क्षमताको अभिव्यक्ति हो, जसको कारण उनीहरूले शैक्षिक संस्थानको प्रशासन द्वारा सँधै कार्यलाई हल गर्न स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्षम छन् साथै साथै प्रशिक्षणको दौरान उठ्दैछन्। यो अभ्यासमा लागू एक सिद्धान्त हो।
शिक्षकको क्षमताहरू तीनवटा प्रमुख क्षमताहरूमा कम छन्:
मामलोंको वास्तविक अवस्थामा शिक्षण विधिहरूको प्रयोग;
निर्णय-प्रक्रियामा लचीलापन, प्रत्येक कार्यका लागि विभिन्न प्रविधिहरू;
एक शिक्षकको रूपमा विकास, विचारहरूको नवाचार र कौशलको सुधार।
यी तहहरूको स्वामित्वमा निर्भर छ, त्यहाँ पाँच तहहरू छन्:
क्षमताको पहिलो स्तर प्रजनन हो।
दोस्रो छ अनुकूली।
तेस्रो एक स्थानीय-मोडेललिंग एक हो।
चौथो प्रणाली-मोडेललिंग ज्ञान हो।
पाँचौं प्रणाली-मोडेलिंग रचनात्मकता हो।
प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन निम्न आवश्यकताहरूमा आधारित छ:
व्यक्तिगत विशेषताहरूमा फोकस गर्नुहोस्;
व्यावसायिक विकास पहिचान गर्न अघिल्लो आकलनको तुलना;
निदान - पनि दक्षता को विकास को लागि निर्देशित हुनु पर्छ, को तरिका मा सुधार र योजना को लागि योजनाहरु;
स्व-विश्लेषण, आत्म-मूल्याङ्कनको लागि प्रेरणा र अवसरहरूको सिर्जना।
प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन यस्तो मापदण्डमा निर्भर गर्दछ:
काम गर्नको लागि आकर्षण;
मनोवैज्ञानिक र शैक्षणिक आधारहरूको ज्ञान;
पाठ्यक्रम बनाउन को लागी क्षमता
काममा व्यक्तिगत दृष्टिकोणको आवेदन;
वैज्ञानिक सोचमा विद्यार्थीहरूको क्षमताको विकास;
विद्यार्थीहरू बीच रचनात्मक सोचको विकास;
विषयमा रुचि प्रकट गर्ने क्षमता;
पाठमा प्रतिस्पर्धाहरू - काम र गतिविधिहरूको प्रकार;
भाषण को सहीता;
स्व-शिक्षा, विषय-वस्तु गतिविधिमा व्यक्तित्व र क्षमताहरूको सुधार;
आमाबाबु, सहकर्मीहरू, प्रशासनसँग कुराकानी।
उच्च संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धा
विचारका लागि आकर्षक यी उदाहरणहरू हुन् जुन स्वयं अधीनस्थ श्रेणीका दक्षताहरूको व्यवस्थापन निर्धारण गर्दछ। उनीहरूको कस्ता योग्यताहरू हुनुपर्छ?
नीतिहरूको कार्यान्वयन (आन्तरिक र बाह्य);
सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको नियन्त्रण;
अधीनस्थ अधिकारीहरु को योग्यता को प्रबंधन, एक संरचना को प्रभावी संचालन को सुनिश्चित गर्न;
तत्वहरू जोड्ने सत्यता कायम राख्न क्षमता;
विशेष प्रोग्रामहरुको निर्माण उभरिरहेको समस्याहरूको लागि उपयुक्त, कार्यक्रमको कार्यान्वयन;
विधायी पहलको दावी को वास्तविककरण।
पावर, जानिन्छ जस्तै, कार्यकारी, न्यायिक र विधानमा विभाजित छ। अदालतको प्रतिस्पर्धा उनको स्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। उदाहरणका लागि, न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले केवल राज्यहरू बीचका मामलाहरूसँग सम्झौता गर्न सक्छ, जबकि आर्थिक मामला मध्यस्थताका अधीनमा छन्। यस्तो संस्थाहरूको क्षमता तिनीहरूको चार्ज, साथ साथै संविधानमा स्थापित गरीएको छ।
व्यवसायिक संस्थाहरू, फर्महरू, आदिको प्रतिस्पर्धाहरू
कम्पनीको मुख्य क्षमताहरू यसको अपरेशनल सुधारको आधार हो, यसको उद्देश्य सुधार र लाभ बनाउने उद्देश्य। पर्याप्त योग्यता प्राप्त गर्न संगठनलाई न केवल रहन मात्र अनुमति दिन्छ, तर अर्को स्तरमा प्रगति गर्न पनि अनुमति दिन्छ। कुञ्जी क्षमताहरू कम्पनीको गतिविधिसँग नजिकै हुनुपर्छ। त्यसैले यसले तपाईंलाई सबैभन्दा लाभ उठाउन अनुमति दिन्छ।
व्यवसायको क्षेत्रमा व्यापारिक कम्पनीको उदाहरणमा संगठनको प्रतिस्पर्धाहरू:
क्रियाकलाप (बजार) को क्षेत्र को ज्ञान र यस ज्ञान को निरंतर अद्यतन;
ज्ञानको विश्लेषण गर्ने क्षमता प्राप्त भयो र कम्पनीको लाभको लागि सही निर्णयहरू लागू गर्दछ;
निरन्तर अगाडि अगाडी बढाउने क्षमता।
क्षमता, दायरा जो केहि धमिलो छ, र योग्यता: योग्यता को अवधारणा दुई सर्तहरू सीमा छ। पहिलो, केहि मूल संग भ्रमित छ lexical सुविधा र एटिमोलजी धन्यवाद, र तिनीहरूलाई संग सम्बन्ध शब्द क्षमता को विकल्प द्वारा निर्धारण गरिन्छ। को केहि थप जटिल योग्य संग: युरोपेली समुदाय अवधारणा पहिचान मा, जबकि घरेलू विज्ञान निहित सम्झौता भन्दा तिनीहरूलाई अलग। यस कारण, छैन रूपमा स्पष्ट रूपमा हामी कोर competencies को पद संग अवस्था थियो।
ग्राहक-उन्मुख दृष्टिकोण: उद्देश्य र प्रशिक्षण कार्यक्रम
एक बजार अर्थव्यवस्था मा सरकार को भूमिका
योकोटरिंगबर्ग स्टेशन: ठेगाना, निर्देशन
चिकित्सा केन्द्र "स्वास्थ्य एकेडेमी", Elektrostal: ठेगाना, समीक्षा
ल्यापटपमा कुञ्जीपाटी कसरी लक गर्ने? यसलाई अवरुद्ध गर्ने तरिका
भित्री सजावट लागि आफ्नै हात संग मड्यूलर ढाँचा कसरी बनाउने
चिडियाघर मिन्स्क लायक एक यात्रा!
एक सभ्य मानिस - अन्तस्करणले मा बसोबास गर्ने एक छ
नयाँ वर्ष आफ्नो प्रियजनलाई दिन के: हामी प्रश्नको जवाफ पाउन?
AMD Phenom द्वितीय x4 925: विनिर्देशों, वर्णन र समीक्षा